သက်ဝေ: ချစ်လို့ တက်ဂ်တဲ့ ပိုစ့်
ဒီတဂ်ပို့စ်က စိတ်ဝင်စားစရာပဲ ....
khin oo may July 6, 2010 at 10:09 PM
သက်ဝေ July 6, 2010 at 10:15 PM
ကော်မန့် တွေ တက်မလာဘူး... ပြဿနာပဲ...
အပြုံးပန်း July 6, 2010 at 10:17 PM
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ခံယူမိလို့ ရေးရပါအုံးမယ်။
Phyo Evergreen July 6, 2010 at 10:52 PM
ဒီတစ်ခါတော့ ဒို့ ၁ ပဲ.. ငှင်းငှင်း..။
Kay July 6, 2010 at 11:04 PM
မောင်မျိုး July 6, 2010 at 11:11 PM
တကယ်တော့ ကျနော်က အိမ်ထောင်ပြုဖို့ အစီစဉ်ရှိသား =) အမက မတဂ်တော့ မရေးတော့ပါဘူး ဟိဟိ အင်းးး ခင်တဲ့သူတွေပဲ တဂ်တာဆိုတော့ ကျနော်မပါဘူးပေါ့ မခင်ဘူးလို့ သတ်မှတ်လိုက်တော့မယ် မအိပ်ခင်လေးလာဖတ်တာမို့ စိတ်ကောက်ကောက် မျက်နှာကို သုန်မှုန်ပြီး အိပ်ယာဝင်ပါပြီးခင်ဗျား။
တဂ်ထားတဲ့သူတွေရေးမယ်ပို့စ်ကို စောင့်ဖတ်အုံးမှ စိတ်ဝင်းစားစရာကောင်းမှာ ဥပမာ ကိုရွာသား :P
စုချစ် July 6, 2010 at 11:25 PM
အမသက်ဝေမမြင်ခင် ချွတ်နင်းပြီး ပုန်းလျှိုးကွယ်လျှိုး ပြန်ပြေးမှပဲ....
Ko Paw July 6, 2010 at 11:27 PM
လာမယ်.... ကြာမယ်လေ..း-)
အမျိုးသားဘလော့ဂါတွေအတွက် ဒီပို့စ်မျိုးက စာပေ စိစစ်ရေးတင်ရလို့ ကြာတတ်တယ်။ စိစစ်ရေးမူဝါဒနဲ့ မကိုက်ညီတာ ရေးတင်မိရင်... ဘလော့ဂ်ရေးသားခွင့် ပိတ်ပင်ခံနိုင်ရတယ်ဆိုတော့ လိမ္မာပါးနပ်စွာ ရေးနိုင်မှ တော်ကာကျမယ်။
T T Sweet July 6, 2010 at 11:39 PM
လာပြီ ... လာပြီ ဒေါ်သက်ရီ .... အဲလေ ... ဒေါ်ဆွိတီ ...
အန်တီသက်ဝေက ချစ်လို့တက်ဂ်တာတော့ ဟုတ်ပါပြီ။ ဒီကလဲ စာရေးကကောင်းကောင်းဆိုတော့ ... ဘယ်လိုဖတ်ကောင်းအောင် ရေးရမယ်မှန်းမသိဘူး။ လာမယ် ကြာမယ်နော် ...
Moe Cho Thinn July 7, 2010 at 1:05 AM
ချိုသင်းတော့ မရေးတော့ပါဘူးနော့ မမ။
သူ့အကြောင်း ရေးလွန်းလို့ သူ့သူငယ်ချင်းတွေကတောင် ငါတောင် ကြိုက်ချင်သလိုလို ဖြစ်လာပြီလို့ ပြောလို့..ဘရိတ်အုပ်အုံးမှ..။ :D
ဂျူနို July 7, 2010 at 3:39 AM
ဟုတ်ကဲ့ မမသက်ဝေ။ ညီမလေး မမတို့ ရေးတာပဲ ဖတ်ပါတော့မယ်။ ညီမလေးက ငယ်သေးတယ်လေနော်။ မချစ်လို့ မရေးခိုင်းတာမှ မဟုတ်တာနော်လို့ နော်။
myo July 7, 2010 at 9:07 AM
ဒါတွေက သာမီးနဲ့ မဆိုင်ပါဘူးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
ဧပရယ်လ်ပူး@ပူးတေ July 7, 2010 at 9:48 AM
ဒီအစီစဉ်လေး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်... စာရေးကောင်းတဲ့ စီနီယာ အစ်ကိုတွေ အစ်မတွေ ရဲ့ စာကောင်းလေးတွေ ဖတ်ခွင့်ရတော့မှာပေါ့....
:D ကျေးဇူး မမသက်ဝေ
Vista July 7, 2010 at 10:24 AM
ရေးပါ့မယ် သူများတွေနဲ့ တော့တူမှာမဟုတ်ဘူး
sonata-cantata July 7, 2010 at 10:29 AM
Pwint Myue Zin July 7, 2010 at 11:04 AM
ဖတ်ပြီးကတည်းက ရေးချင်နေတာကို တဂ်ဘူးတော့.. ဟင့်
taw pi.. kaw to bue.....
Pwint Myue Zin July 7, 2010 at 12:39 PM
MrDBA July 7, 2010 at 1:00 PM
ဟုတ်ကဲ့ .. သို့သော် ပိတ်ရက်မှ .. :P
ချစ်ကြည်အေး July 7, 2010 at 9:06 PM
ဪ...ဒီမှာလည်း ရေးထားသကိုး သိပါဘူး ဖဘထဲမှာပဲ တက်ဂ်တာမှတ်လို့ ဟိုမှာသွားရေးခဲ့တာ...တုံးချက်က...။
ညတွင်းချင်းလိုချင်ရင် ဒီပိုစ့်ကို ကော်ပီဆွဲတင်လိုက်တာပေါ့ သိတ်မကွာဘူးပဲ...:P
ကလူသစ် July 8, 2010 at 1:06 AM
မူရင်းပို့စ်လဲ ဖတ်ထားပါတယ်။ တဂ်တဲ့အကြောင်းလဲ သိထားပြီးသားပါ။ အကြောင်းအချက်လေးတွေကြောင့် ရေးရင်ကောင်းမလား။ မရေးရင်ကောင်းမလား စဉ်းစားနေတာ။ တော်ကြာ လင်မယား ထသတ်နေရအုန်းမယ်။ :) ခက်တာက ဒီလို အနုအရွလေးတွေ မရေးတတ်တာပဲ။
ရွှေရတုမှတ်တမ်း July 8, 2010 at 6:26 AM
T T Sweet July 8, 2010 at 12:56 PM
မယ်ဆွိတော့ တာဝန်ကျေခဲ့ပါပြီ ... ကိုကြီးကျောက် ... အပေါ်က တက်ဂ်ထားတဲ့သူများ ရေးကြပါဦးတော် ...
တန်ခူး July 8, 2010 at 1:06 PM
ချစ်လို့ တက်တဲ့ပို့ စ်ဆိုတာနဲ့လုပ်လက်စအလုပ်တွေ အဝေးလွှင့်ပစ်ပြီး ချက်ချင်းကို ရေးချင်စိတ်ပေါက်သွားတာပါ... အသွင်မတူတဲ့အကြောင်းလေးတွေကို ပို့ စ်တခုရေးခဲ့ဖူးတယ် သက်ဝေရေ... တော်တော်ကြီးကို မတူတာမို့ မှတ်တမ်းတင်တဲ့သဘောပါ... ကဲ...ခုတော့ တူတာတွေ ဘာရှိသလဲ ထိုင်စဉ်းစားဦးမှ... ဆံပင်တွေ ပိုဖြူသွားရင် လျော်ပေးရမှာနော်...
Anonymous July 8, 2010 at 1:13 PM
မျိုး - ရှိရင်ရေးပါ၊ (ဟီး အထင်သေးသလိုများဖြစ်နေမလား)။ မသက်ဝေမတဟ်ပေမဲ့တို့တဟ်တယ် အဲငှယ်
တီဇက်အေက မရှိချင်ယောင်ဆောင်နေတာမို့ ရေးမာ မဟုတ်
ကိုပေါနဲ့ ကိုကလူသစ်၊ မမကွန် ဘာတွေရေးမလဲ စိတ်ဝင်စားတယ်
ညီမလေး July 8, 2010 at 7:07 PM
ဖတ်ရချည့်သေးရဲ့ပေါ့ .. စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ် ..
အင်ကြင်းသန့် July 8, 2010 at 8:48 PM
blueskyforest July 9, 2010 at 12:14 AM
သက်ဝေရဲ့  C box ဒို့ဆီမှာ ကြည့်မရ။
pandora July 9, 2010 at 1:00 AM
ချစ်လို့ ရေးလိုက်ပါပြီး)
အမ.. အမကိုကျေးဇူးတင်တယ်.. ဒီပို့စ်လေးကြောင့် တူတာ မတူတာတွေဖတ်ခွင့်ရလို့.. ဟီးး
Type by font converter.
Ama, above comment is Myatnoe naw.
မေလေး July 9, 2010 at 12:52 PM
ဟင် ကောက်ဖူးလေ မမကလဲ
အဲလို အဲလို မမကဆွဲဆောင်ချက်း)))
Pwint Myue Zin July 9, 2010 at 5:28 PM